प्रजातन्त्र माथिको उपहास | Mechikali Daily
प्रजातन्त्र माथिको उपहास
Posted By: Mechi Kalion: १८ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०६:२८
मतपत्र च्यात्ने रिहर्शल त चुनावको तीन दिन पहिले एउटै दिन, पला र घडीमा ओली भर्सेज प्रचण्ड, देउवा चितवनमा आमने सामने भई गरिसकेका थिए । देशभर भएका सयौँ गाउँ र नगरपालिकाको निर्वाचनमा अरुनै नेतापंक्ति गई प्रचार–प्रसार गरे पनि चितवनमा तीन दलका अध्यक्ष नै आई भोट माग्नुले यो अन्य ठाउँको भन्दा नितान्त फरक प्रसंग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि उनीहरुले नै मत पत्र च्यात्ने मनोविज्ञान विकास गरेका थिए । तीन शीर्षले नै अप्रत्यक्ष रुपमा यो वातवरण तयार पारेका थिए । यिनै टाउकेहरुले चितवन महानगरको चुनावलाई स्थानिय निर्वाचन नभइ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको भन्दा अधिक महत्वको रुपमा सावित गर्ने कोशिस गरेका थिए । देवी र रेणू त केवल साधन मात्र बनाइएका थिए । वास्तवमा यो चुनावलाई पार्टीको जुँगाको लढाइसँग तुलना गरिएको थियो । यो क्षेत्र जित्नु भनेको देशभर नै जित्नु सरहको अघोषित मान्यता र सन्देश देशका तीन ठूला दलहरुले दिइसकेका थिए । परिणाम स्वरुप कार्यकर्ताहरु मतपत्र च्यात्न वाद्य भए ।
अहिले चितवन महानगरपालिकाको घटना छताछुल्ल भएको छ । वास्तविकता गर्भमै रहँदा एक अर्का विरुद्य आरोप प्रत्यारोपको खेती चलिरहेको छ । मतगणना अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगन भएको छ । यसको मूल विषय मतपत्र च्यातिनु रहेको छ । जहाँसम्म मतपत्र च्यातिएको सवाल छ त्यसमा एमाले भन्दा माओवादी केन्द्र बढी जिम्मेवार रहेको ठहर्छ । सामान्य मनोविज्ञानले के भन्छ भने आफ्नो पक्षमा कुनै निर्णय हुँदै छ भने त्यस पक्षधर कहिल्यै सो निर्णयका विरुद्ध उत्रदैन । जहाँसम्म मतगणनाको सवाल छ त्यहाँ एमालेले शुरुबाटै अग्रता लिँदै लगभग जित्ने निश्चित प्रायको अवस्था सिर्जना भएको ठानिएको थियो । माओवादीका उम्मेदवारले मतान्तर घटाए पनि सो जितका लागि प्रयाप्त नहुने कुरा जोकोहीले बुझ्ने सवाल थियो । अब कुरो रह्यो मत पत्र च्यातेको । यस सवालमा लगभग जीत उन्मुख दल एमाले यसमा सहभागि भयो भन्दा सामान्य मनोविज्ञान समेत फेल खानेमा पक्का छ । प्रतिवेदनहरु पेश होलान् । विभिन्न कारण, उपकारणहरु पत्ता लाग्लान् । तथापि सामान्य मानिसको आँखामा जित्ने भनी ठानिएको एमालेले वास्तवमा मतपत्र नै च्यात्ने काम गरेन कि ? बरु माओवादीका एजेण्टहरुलाई परिणाम अगावै विभिन्न निहुँमा हतोत्साहीत पार्ने काम एमालेका एजेण्टहरुबाट भयो कि ? जीत उन्मुख मानसिकताले हार उन्मुख मानसिकताको व्यवहारिक मनोविज्ञान बुझ्न सकेन कि ? भन्ने शंका चाहिँ रहन्छ ।
चितवन महानगरपालिकाको मतगणनामा जो कसैले सो हर्कत गरेको भएपनि त्यो हार स्वीकार्न नसक्ने अवस्थाको पूर्व आँकलन गरी गराइएको ठहर्छ । पराजय पछि हुने पीडा कम गर्नको लागि रचिएको एक प्रपंच जस्तो लाग्छ । पराजय हुनुको कारण आफ्नो मतपत्र च्यातिएको भन्ने गलत प्रमाण पेश गर्न पनि यो प्रपंच भएको हुन सक्छ । जसरी पनि हार्ने अवस्था आएपश्चात् रचिएको एक अप्रजातन्त्रिक काम हुन सक्छ । दावीहरु जेसुकै पेश भए पनि विश्वासिलो पक्ष भनेको तीन शीर्षले बनाइदिएको हाउगुजीबाट आतंकित कार्यकर्ताहरुको स्वतस्फुर्त व्यवहारको प्रस्तुति थियो यो काण्ड ।
अब हाम्रा दलहरुका प्रजातन्त्र र निर्वाचन प्रतिको अगाढ विश्वास र उनीहरुको व्यवहारबीचको सम्वन्ध हेरौँ । प्रजातन्त्रलाई मुलमन्त्रका रुपमा स्वीकार्ने तथापि व्यवहारमा आफ्नो स्वार्थ र पक्षमा भए मात्र सो स्वीकार्ने । प्रजातन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिको मूल धर्म ठान्ने हाम्रा दलहरु किन यसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन् ? किन फगत नारामा मात्र प्रजातन्त्रलाई सिमित पार्छन् ? पहिलो सवाल प्रजातन्त्र भन्ने अवयव कसरी जिउँदो रहन्छ भन्ने हो । प्रजातन्त्र जीवित छ वा छैन भनी नाप्ने औजार अरु केही नभएर स्वच्छ, स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन हो । यसमा विश्वास भएमा मात्र देशमा प्रजातन्त्र रहन सक्छ । प्रजातन्त्र शब्दमा जति सुन्दर छ यसलाई अझ सुन्दर, चलाएमान, जीवित र क्रियाशील पार्न निर्वाचनले अहम् भूमिका खेल्छ ।
प्रजातन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनका ठेकेदार भनी दावी गर्ने हाम्रा दलहरु प्रजातन्त्र र त्यसलाई जीवित पार्ने मूख्य साधन निर्वाचनलाई आफू जित्ने औजारका रुपमा मात्र स्वीकार्छन् । अनि खै त निर्वाचनप्रति हाम्रा दलहरुको विश्वास ? खै त निर्वाचनका परिणामहरुलाई निसर्त स्वीकार गरिएको ? हरतरहका हतकण्डा अपनाएर चुनाव जित्ने प्रयास गर्छन् । निर्वाचन हार्नका लागि हो भन्ने ठान्दैनन् हाम्रा दलहरु । प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनी ठान्छन् तथापि आफू विजेता नभए सम्म त्यो प्रतिष्पर्धालाई सहज रुपमा स्वीकार्दैनन् । आफ्नो पराजय कानूनी रुपमा वैद्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा अस्वीकार्य ठान्छन् । दौडमा भाग लिन्छन् तर आफू अब्बल नठहरे दौडको नियमलाई धोती लगाइदिन्छन् । आफ्नो कारण हैन कि आयोजक वा अन्य कसैका कारण खेल हारेको ठान्छन् । सकारत्मक परिणामको भागिदार आफू त नकारात्मकको अन्य । यस्तो कुिटल कला हाम्रा दलहरुसँग छ ।
अनि भनिरहन्छन् कि उनीहरुको मूल धर्म प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचन हो र रहिरहने छ । यस्ता हाँस्यास्पद टिप्पणीहरु हामीहरुले सुन्नु, देख्नु र भोग्नु परेको छ र पनि विकल्पको अभावमा खराब विकल्पहरु मध्येबाट सही ठानिएकोमा मतदान गर्नु परेको छ । दलहरुका प्रजातन्त्रिक मान्यता विरुद्धका यस्तै कर्मको परिणाम स्वरुप रन्जु दशर्ना र किशोर थापाहरुले केही दिनको चुनाव प्रचार–प्रसारमा हजारौँ भोट ल्याएर आफूहरु अबको प्रमुख विकल्प भएको प्रमाण पेश गर्छन् । वास्तवमा ओठे प्रजातन्त्रको नारामा मात्र हाम्रा परम्परागत दलहरु लागिरहने हो भने अबको केही वर्षमा नयाँ उदयीमान दलहरुबाट नबढारिएलान् भन्न सकिन्न ।
अबका दिनमा सबै प्रमुख दलहरुले आफ्ना दलभित्र प्रजातन्त्र, निर्वाचन, स्वाधीनता, राष्ट्रियता जस्ता यावत विषयमा काउन्सिलिङ कक्षाहरु चलाउनु अनिवार्य छ । केन्द्रीय स्तरबाट नै निर्वाचनको गाम्भीर्यता र निष्पक्षता जस्ता विषयमा आ–आफ्नो दलभित्र प्रयाप्त छलफल, निर्देशन भएमा चितवन काण्डहरु दोहोरिन सक्दैनन् । अनिमात्र प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण रोकिन जान्छ । निर्वाचन वास्तविक निर्वाचनका रुपमा रहन्छ । जनमतको उपहास हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा मात्र जनता अमुक दलका नेता जिताउन मात्र मत खसाल्दैनन् । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त राख्न मत खसाल्छन् । निर्वाचनमा विजय, पराजय जे भए पनि सहज रुपमा स्वीकार्न मतदान गर्छन् ।